Ahoana ny fomba fanaovana kalandrie votoaty marketing video | Martech Zone
Zoma, Desambra 10, 2021 Zoma, Desambra 10, 2021 Douglas Karr
Tamin'ny herinandro lasa teo, iray amin'ireo tetikasa natolotro ny fanaraha-maso fanatsarana finday ho an'ny mpanjifa iray. Na dia nahomby aza izy ireo tamin'ny fikarohana desktop, dia nihemotra tamin'ny laharana finday izy ireo raha oharina amin'ireo mpifaninana aminy. Rehefa nandinika ny tranokalany sy ny tranokalan'ny mpifaninana aminy aho, ny elanelana iray amin'ny paikadin'izy ireo dia ny varotra video.
Maherin'ny antsasaky ny fijerena horonan-tsary rehetra dia avy amin'ny fitaovana finday.
Ny paikady dia amin'ny lafiny maro. Ny mpanjifa sy ny orinasa dia manao fikarohana sy fikarohana amin'ny alàlan'ny fitaovana finday. Fitaovana tonga lafatra ny horonan-tsary:
YouTube dia mbola ho motera fikarohana faharoa lehibe indrindra, miaraka amin'ny ankamaroan'ny horonan-tsary jerena amin'ny fitaovana finday.
YouTube dia loharano miavaka amin'ny rohy miverina amin'ny votoatin'ny tranokalanao raha toa ianao ka Ny fantsona YouTube sy ny horonan-tsary tsirairay dia namboarina tsara.
Ny pejin'ny findainao, na dia feno antsipiriany sy ahalalana aza, dia afaka mitarika tanteraka ny firotsahana amin'ny alalan'ny horonan-tsary manampy azy.
Mazava ho azy, ny fampandrosoana a tranomboky atiny ny horonan-tsary dia mitaky workflow avy amin'ny ideation amin'ny fanatsarana. Ary ny paikadin'ny horonan-tsary dia afaka mahafaoka zavatra maro karazana horonan-tsary mba hilazana amin'ny fomba mahomby ny tantaran'ny marikao. Tsy tokony ho lohahevitra sy datin'ny famoahana fotsiny ny kalandrienao, fa tokony hampiditra ny fizotran'ny asa manontolo, ao anatin'izany:
Daty tokony nalaina sary, nalaina sary, nanova, navoaka, navoaka ary nampiroborobo ny horonan-tsaryo.
Ny antsipirihan'ny sehatra hamoahanao ny horonan-tsarinao.
Ny antsipiriany momba ny karazana video, anisan'izany ny endrika fohy tena amin'ny fomba antsipirihany.
Aiza no ahafahanao mampiditra sy mampiroborobo ny horonan-tsaryo, ao anatin'izany ny fanentanana hafa mety hampiditra azy io.
Ahoana no handrefesanao ny fiantraikan'ny horonan-tsary amin'ny varotrao ankapobeny.
Tahaka ny amin'ny fanentanana ara-barotra rehetra, mampiasa a lisitra tsara ho an'ny drafitra esory ny hevitrao mba hahafahanao mampitombo ny fiantraikan'ny marketing video anao. Na dia mety mitaky loharano fanampiny aza ny horonan-tsary amin'ny fotoana sy ny vola, dia manan-danja tokoa ny tambin'ny vidéo. Raha ny marina, dia miady hevitra aho fa very tanteraka ny ampahany manan-danja amin'ireo ho mpanjifanao amin'ny alàlan'ny tsy fampidiranao video amin'ny paikadin'ny varotrao amin'ny ankapobeny.
Amin'ity sary ity, Famokarana iray mandeha amin'ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny fomba handrafetana sy handaminana ny atiny video miaraka amin'ny kalandrie votoaty. Hazavain'izy ireo ny fomba ahafahan'ny fampiasana kalandrie votoaty manampy amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny atiny video. Misy ihany koa ny fomba fijery ambony avy amin'ireo mpitarika indostria momba ny fomba fizotry ny fanalahidin'ny fahombiazan'ny paikady marketing votoaty.
Tags: ahoana noSary torohayfamokarana iraylahatsarykalandrie votoaty videopaikady votoaty videovideo marketinginfographic marketing amin'ny horonan-tsaryvideo marketing strategy